ငါဘာကြောင့် Porn ကိုမကြည့်ဘဲရပ်နေရတာလဲ (Onion) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
အဘယ်ကြောင့်ငါ Porn အကဲခတ်တော့ဘဲဒီတော့သင်က (ယင်းကြက်သွန်နီ) သငျ့
“ ကြက်သွန်နီ” က NoFap ကိုဖျက်ဆီးသည်။
ငါကဝန်ခံမကြိုက်ဘူး, ဒါပေမယ့်ငါ porn အများကြီးစောင့်ကြည့်လေ့ရှိတယ်။ မကြာသေးမီကမှီ, ငါသည်နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာတစ်ညစ်ညမ်း website ကိုလာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်, ထိုသို့လျင်မြန်စွာအပျက်သဘောငါ့အသက်ကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှရှုထောင့်ထိခိုက်ခဲ့တဲ့အလေ့အထတွေဖြစ်လာတယ်။
ထိုအခါတနေ့ငါလုံးဝ porn ကိုကြည့်ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်, ချက်ချင်းငါ့အသက်ကိုလှည့်လာတယ်။
ကိုယ့်တဦးတည်းရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက်ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲ, ငါနှောင်းပိုင်းတွင် PornHub ပေါ်တွင်ဗီဒီယိုများစောင့်ကြည့်ဖွင့်တည်းခိုမခံခဲ့ရ, ဒါကြောင့်ငါလျောက်ပတ်သောအချိန်နာရီအိပ်ရာသွားနှင့်ခံစားမှုနှိုးထနှင့်အိပ်ပျော်ဖို့အဆင်သင့်ခဲ့သည်-ငါနှစ်များတွင်ခဲ့င်ထက်ပိုပြီးစွမ်းအင်ခဲ့ သောနေ့၌ယူပါ။ နှစ်ပတ်အတွင်းပြီးနောက်, ငါ့ရည်းစားနဲ့ကျွန်မကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်မီးပွားပွနျလညျရှာဖှတှေ့ခဲ့ငါမှောင်မိုက်၌တွေ့မြင်နိုင်စွမ်းရရှိခဲ့, ငါကောလိပ်ကျောင်းပြီးကတည်းကပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့မှန်မှန်ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ porn စောင့်ကြည့်စရာမလိုဘဲသုံးပတ်ပြီးနောက်ငါသည်ငါ၏အသက်တာ၏အကောင်းဆုံးပုံသဏ္ဍာန်အတွက်, ငါသည်ခပ်သိမ်းသောကာလမြေပြင်ကိုချွတ်သုံးပေလှုပ်ရှားခဲ့သည်, ငါဖျားနာခြင်းနှင့်ငါ၏အကြံအစည်နှင့်အတူဒဏ်ရာရအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်ပါတယ်။
ငါ porn ဖြတ်ဖို့ကအားလုံးကိုကြွေး။
အလေးအနက်ထား, ငါ့အသက်ကိုလုံးဝပြောင်းလဲသွားပြီ။ ငါညစ်ညမ်းရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ခြင်းကိုရပ်တန့်သွားသည်နှင့်အမျှရုံး၌ ပို၍ အာရုံစူးစိုက်နိုင်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏အမိန့်မှာအချိန်စီးဆင်းမှုကိုနှေးကွေးစေနိုင်သည်။ လွန်ခဲ့သည့်လများအတွင်းကျွန်ုပ်သည်ရုံး၌ထိရောက်မှုအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီးမိုးကြိုးတိမ်တစ်ခုတည်းမရှိသော်ငြားလည်းလျှပ်စီးသည်ကျွန်ုပ်ကိုနာရီတိုင်းတစ်ကြိမ်ရိုက်ခတ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်မြင်သံကြားကြည့်တဲ့ကွန်ပြူတာရှေ့မှာကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းအချိန်ဖြုန်းတာကိုရပ်လိုက်တာနဲ့ဒီအပြောင်းအလဲတွေစတင်ခဲ့တာမတိုက်ဆိုင်ပါဘူး။
ငါ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဘဝအဖြစ်ကောင်းစွာတိုးတက်ခဲ့သည်။ ကျွန်မအနေနဲ့စိတ်ခံစားမှုအဆင့်ကိုအပေါ်မှာငါ့ရည်းစားနှင့်စပ်လျဉ်းဒုက္ခရှိသည်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ပေမယ့်ငါ porn ကိုကြည့်ရပ်တန့်တစ်ချိန်ကကျွန်မအခြားလူသား၏ဘဝအင်အားကိုစုပ်ယူနှင့်ငါ့ကိုယ်ပိုင်-ဒီတော့ယခုပငျငါ့ရည်းစားနှင့်အတူကပေါင်းစည်းဖို့စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနဲ့ကျွန်မသို့ fused ပါပြီ တစ်ဦးအနည်းကိန်း entity! ငါသည်ငါ့ omnipotent porn-အခမဲ့ပုံစံသို့သူမ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာအနှစ်သာရကို subsumed ကြပါပြီ, သူ့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအမှတ်တရများဖြစ်သကဲ့သို့ယခုသူမ၏ခံစားချက်များကို, သတ္တုတွင်းဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့နီးကပ်လာခဲ့ဖူးပါဘူး!
သငျသညျ porn ကိုကြည့်လျှင်, ငါရပ်တန့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်သင့်အားတိုက်တွန်းကြသည်။ သင်၏အသက်တာကိုသင်တောင်စိတ်ကူးလို့မရပါဘူးနည်းလမ်းပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်သင်၏သိသာသည်အခြားနှင့်အတူတစ်ဦးပိုမိုနက်ရှိုင်းစိတ်ခံစားမှုဆက်သွယ်မှု, ဒါမှမဟုတ်ကောင်းကင်တမန်များသောဝဒေနာအတွက်အော်ဟစ်, ဒါမှမဟုတ်အဆက်မပြတ်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောစကားသံတကားဟုနှင့်အတူဝေးသောဂြိုဟ်ပေါ်မှာကြီးမားတဲ့ပိရမစ်၏အိပ်မက်မက်ဖို့ကိုမြင်သောအတတိယမျက်စိလိုပါက "ယခုဤသင့်အိမ်ပါပဲ" ဟုသငျသညျ တကယ်ကပစ်ခတ်ပေးရန်ရှိသည်။ ငါလုပ်ခဲ့တယ်, ငါဤအရာအလုံးစုံတို့ကိုတွေ့ကြုံနှင့်ပိုပြီး။
ငါနောက်ကျော porn ကိုစောင့်ကြည့်သွားပါဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ ငါအလိုချင်ရင်တောင်ငါ့ကိုယ်နှစ်မိုင်ပတ်လည်အတွင်းမည်သည့်ကွန်ပျူတာတစ်လုံး၏ hard drive ကိုဖျက်ဆီးမယ့်အစွမ်းထက်သံလိုက်စက်ကွင်းကိုထုတ်ပေးသောကွောငျ့, ငါနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပေ။ နညျးလမျးမြားစှာတှငျ, ငါဘုရားကဲ့သို့ဖွစျပွီသေးရီစရာငါမထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာငါ့ကိုယ်ပိုင်ထိနျးခြုပျတန်ခိုးတော်ဖြစ်၏။ ဒါဟာကြောက်မက်ဘွယ်ပါပဲ။ ငါမထိအရာအားလုံးသည်အလျင်အမြန်မီးတောက်တစ်ခုဘောလုံးကိုအတွက်ပြိုကွဲမည့်ရှေ့တော်၌ထိုကောင်းကင်သို့ပျံစေတဲ့အဖြူချိုးငှက်သို့လှည့်။ ဤသူသည်ငါတို့ထိတိုင်းတစ်ခုတည်းအရာဖွစျသှား, ငါ porn ကိုကြည့်ရပ်တန့်ဖို့ရှေးခယျြမှုလုပ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အားလုံးပါပဲ။
ဒါဝိဒ်သည် Swegler အားဖြင့်